7 အဘို့ရလဒ် kungfu panda
kungfu ပန်ဒါ: ကွန်ဖူး Hustle
ဖိုးဒီဂိမ်းထဲမှာစိန်ခေါ်မှုများလွန်ကိုကူညီပါ။ အမောက် Button လေးကိုင်ပြီးစဉ်ကသူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှားခြင်းဖြင့်ပြသလမ်းညွှန်မှု၌သင်တို့မောက်ရွှေ့ပါ။ သင်မောက်ပြောင်းရွှေ့ပြီသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထို Button ကိုလွှတ်။
Kung Fu Panda Play: အချိုင့်ကာကွယ်ပါ: အကြောက်မက်ဘွယ်လူမှုအဖွဲ့စွန့်စားမှု၌သင်တို့၏စိန်ခေါ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒီချက်ပြုတ်ချပ်ဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အစွန်းရောက် Kung Fu ကျွမ်းကျင်မှုချွတ်ပြရန်, သငျသညျအစာကိုခုတ်နှင့်အချို့သောအစွန်းရောက်ချပ်အတှကျပွငျဆငျနိုငျလြှငျတွေ့မြင်!
Kungfu Panda ကတ်။ ဖိုးအားလုံးဇာတ်ကောင်အနိုင်ယူကူညီရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ
Kungfu Panda နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်, သူတို့အချင်းချင်းအတူပြိုင်ကားနေကြတယ်ဒီအချိန်, အ 1st ရာထူးများအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံး Kungfu Panda ဇာတ်ကောင်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင် Choose နှင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်။ ခံစားကြည့်ပါ !!!
ဟေလာရီ Duff နာမည်ကြီးအဆိုတော်များနှင့် actrice ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျော်ပါစေဂိမ်းထဲမှာသင်ကသူမ၏သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်စေနိုင်သည်!
ရုံပိုင်ခွင့်အချိန်ကရိုးခုန်နှင့် Sonic ကသူ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြသခွင့်အားဖြင့်အရူးလှည့်ကွက် Perform ။
သော့ခတ်ရန်အဆင်သင့် Get 'n load ...
ben 10 moto ကိုနောက်ကောက်
သင်အကြိုက်ဆုံးဘင် 10 အတားအဆီးများရိုက်နှက်ကိုကူညီပါနှင့်လုံခြုံစွာ finish ကိုလိုင်းရ။ သင့်ရဲ့ position နဲ့ဆက်ဆံဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနှင့်သင့်စက်ဘီးကိုထိန်းချုပ်။ မှတ်စုဆောင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိအတားအဆီးများရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mini-ဂိမ်းရဲတိုက်ကိုမုတ်ဆိတ်နှင့် Pico ပေါက်ကွဲမှု crashing မှဝိညာဉ်ရေးရာနောက်ဆက်တွဲတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံ၏သစ်တစ်ခုအဆင့်အထိခေါ်ဆောင်သွား။ ဒါဟာအစသှငျးခံကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သော site ကိုပြုလုပ်လူများအပေါင်းတို့သည် (35 ထူးခြားသော Ng ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုယ်စားလှယ်ငါတို့၏အခှနျင်